हामीलाई विस्थापित गराउन खोजियो– डेरी व्यवशायी NewsButwaltoday
आषाढ २५ २०७७ | 2020 Jul 09
हामीलाई विस्थापित गराउन खोजियो– डेरी व्यवशायी
सानो लगानीबाट दुग्ध उत्पादक किसानबाट संकलन देखि उपभोक्ता कहाँ पु¥याउँदै आएका व्यवसायीहरु लाई सरकारले पछिल्लो समयमा ल्याएको दुग्ध निर्देशीकाकै कारण पेशा नै विस्तापित हुने खतरा बढेको छ ।
दुध तथा दुग्ध जन्य पद्धार्थको शुद्धाता एव्म गुणस्तर निर्देशीका जारी गरी अवको एक महिनामा खुल्ला दुध विक्रि गर्न नपाउने नीति ल्याएको हो । सोही अनुसार रुपन्देही लगायत देशभरका दुग्धजन्य कारोबार गर्ने व्यवसायीहरु, किसानहरु मर्कामा परेका छन् । सानो लगानीबाट स्थापना भएका व्यवसायीहरुले सरकारले तुरुन्तै आफ्नै ब्रान्ड र पोकामा मात्रै दुध विक्रि गर्नुपर्ने नीति ल्याएको छ ।
सरकारले काठमाण्डौको अवस्था हेरेर देशभर एउटै नीती लाद्न खोजेको भन्दै रुपन्देहीका दुग्ध किसान, डेरी व्यवसायी तथा दुग्ध संकलन सहकारीहरु समेत गुनासो पोखेका छन् ।
बुटवलमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी रुपन्देही जिल्लाका डेरी व्यवसायीहरु र दुग्ध उत्पादक किसानहररुले सरकारले ल्याएको दुग्धजन्य पदार्थ सम्बन्धि नीति हतार गरेर ल्याएको बताएका छन् ।
उनीहरुले सरकारले ल्याएको निति अनुसार किसान, दुग्ध व्यवसायीहरु विस्तापित हुने खतार बढेको भन्दै यसले थप ‘मिल्क होलिडे’ समेत गर्नको लागि प्रोत्साहित गर्ने गरेको बताएका हुन ।
बुटवलमा शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी रुपन्देही डेरी व्यवसायी समितिका अध्यक्ष नेत्र प्रसाद पाठकले किसान, सहकारी तथा डेरी व्यसायीहरुलाई नै नयाँ नितिले समेट्न नसकेको बताए । उनले दुग्ध निर्देशिका– २०७५ लाई संशोधन गरी किसान मैत्री निती ल्याउनको लागि आग्र्रह गरेका हुन ।
किसानहरुको रोजाईमा अहिले डेरी पसलको खुल्ला दुध भएको भन्दै प्याकिङ्ग गरेको दुधमा उपभोक्ताहरुको रोजाई नभएकै कारण जबरजस्ती उपभोक्तामथि नै नीति लाद्न खोजेको बताएका हुन ।
केही समय पहिला सरकारले एक महिनाको समय सिमा निर्धारण गरी अनिवार्य रुपमा लोगो अंकित प्याकेजिङ्ग दुध मात्रै विक्रि वितरण गर्नको लागि डेरी व्यवसायीहरुलाई आग्रह गरेका थियो ।
डेरी व्यवसायी समिति रुपन्देहीका अध्यक्ष नेत्र प्रसाद पाठकले आफुहरु सरकारको नीतिको विरोधी नभएको तर यस विषयमा सरकारले आवश्यक छलफल नै नगरी ल्याएको कारण यसका संसोधनको लागि माग गरिएको हो ।
उनले भने–‘उपभोक्ताको रोजाईमा अहिले पनि खुल्ला दुध हुने गरेको छ , तर जबरजस्ती रुपमा पोके दुध खुवाउनु पर्ने यो कस्तो बाध्यता हो ।’ आफुहरुले किसानले दुध दुध देखि लिएर संकलन केन्द्र, डेरी सम्म को पुर्णरुपमा गुणस्तरियता कायम गरिरहेको परिपेक्ष्यमा सरकारले हचुवाको भरमा नीति ल्याउनु आफैमा विरोधासपुर्ण भएको अध्यक्ष पाठकले बतनाए ।
नीजि दुग्ध व्यवसायी व्यसायी गणेश सिंह भण्डारीले आफुहरुलाई कम्तीमा पनि एक बर्ष भन्दा बढिको समय प्रदान गर्नुपर्ने बताए । उनले व्यवसायीहरुले प्याकेजिङ्ग उद्योग स्थापना गर्नको लापि पनि करोडौ रुपैया लागत लाग्ने र यसको लागि कम्तिीमा पनि १ बर्ष लाग्ने भएको ले हचुवाको भरमा एक महिना भित्र नै डेरी बन्द गर्ने गरी ल्याएको नीतिको विरोध गरिएको बताए ।
उनले मिल्क होलिडेको समयमा, नाकाबन्दीको समयमा किसानबाट तोकीएको मुल्यमा दुध संकलन गरी पु¥याएको योगदानको सरकराले अबमुल्यन गरेको उनको भनाई रहेको थियो ।
रुपन्द्येहीमा ३ सय २५ जना डेरी व्यवसायीहरु रहेका छन् । ९५ प्रतिशत खुल्ला दूध उपभोग हुँदै आएको छ । यदि दुध प्याकेजिङ्ग गरेर वितरण गर्ने हो भने यसको प्रक्रियागतरुपमा जाँदा आज संकलन गरिएको दुध कम्तीमा १५ दिन पछि मात्रै उपभोक्ताहा पुग्ने भएको कारण पोकाको दुधमा गुणस्तरियतामा शंंका पैदा भएका डेरी व्यवसायीहरुले बताएका छन् ।
रुपन्देही डेरी व्यवसायी संघका महासचिव भुवन पाण्डेले सरकारले किसानहरुलाई नै मर्कामा पार्ने गरी विदेशी लगानी भित्र्उने सडयन्त्र गरेको बताए ।
रुपन्देही जिल्लामा १० हजार ४ सय बढि किसानहरु डेरी व्यवसायीबाट लाभांवित भएको तथ्यांक छ । स्थानिय दुध उत्पादनको दैनिक ५२ हजार लिटर रुपन्देहीमा विक्रि भैरहेको छ ।
रुपन्देहीमा ३८ हजार मेट्रिक टन बार्षिक उत्पादन हुदै आएको दुधको ५० प्रतिशत रुपन्देही डेरी व्यवसायीमा आवद्ध व्याक्तिहरुले ओगटेका छन् । यस व्यवसायमा ३ हजार जना भन्दा बढि स्वरोजागर रहेका छन् । जसमा न्युन्तम ५ लाख का दरले रुपन्देही ३ सय २५ डेरीले कुल १६ करोड २५ लाख भन्दा बढि लगानी भएको पाइएको छ । जसमा नीजि क्षेत्रको १० करोड भन्दा बढि लगानी भएको छ ।
डेरी व्यवसायी संघले पेशाको निरन्तताको सुरक्षा गर्न माग गरेको छ भने लगानी सुरक्षित गर्नको लागि समेत सरकार संग माग गरेको छ । यस्तै उपभोक्ताको अधिकार अनुसार रोजाईको दुध विक्रि गर्न पाउनुपर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ । यस्तै राष्ट्रिय दुध निर्देशिका २०७५ आवश्यक र व्यवहारिक रुपमा संसोधन गर्नको लागि समेत माग गरेको छ ।
अपडेट : 2019-03-16 17:52:42
नेपालमा भारतीय न्युज च्यानल प्रसारण बन्द
गण्डकी स्कुलका पूर्व विद्यार्थीले गरे विपन्नलाई सहयोग
गृहमन्त्री थापा ओलीकै पक्षमा !
मेयरको निर्वाचनमा बोलेअनुसार काम गरेको दाबी, जनताले के भन्छन कुन्नी ?
गाँउपालिकाको सहयोगमा किशोरीले बनाए मास्क
उपमहानगर भन्छ 'नहर सफाइ' स्थानीय भन्छन् 'नदि दोहन'